သူရိယသိဒ္နန္တ(Surya Siddhanta) ကျမ်း ခေါ် ခောတ်သစ်သချာင်္ဘာသာ၏ ဇစ်မြစ်
တစ်ခါတုံးက မြန်မာ ထန်းဖူးဇာတာ ဗေဒင်ဆောဖ့်ဝဲတစ်ခုကို C++ မှ C# သို့ပြန်ဆိုရေးသားပေးရဖူးသည်။ မူရင်းရေးသားသူသည် ကိုဝဏ္ဏကိုဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ် အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ သူနှင့်သူ၏ ကွန်ပျူတာနက္ခတ် ပညာရပ် အကြောင်းကို ဆောင်းပါးတစ်ခုရေးပေးခဲ့ရဖူးသည်။ အဲဒီတုံးက သူ့ souce code များကို လေ့လာလိုပါက ဖတ်ရှုရန်ပေးခဲ့သည်။ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ နောက်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှ အမှတ်မဲ့ ဖတ်ရှုမိခဲ့ ပြီး ၄င်း source code ထဲတွင်လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသောလျှို့ဝှက်နက်နဲသည့် ရှေးဟောင်းနည်းပညာရပ် တစ်ခုမြုပ်နှံရေးသားထားသည် ကိုတဖြည်းဖြည်းသိရှိလာခဲ့သည်။ ၄င်းမှာ ရှေးဟောင်းအိန္ဒိယမှ ဘုရားမပွင့်မီကတည်းက ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် သူရိယသိဒ္နန္တ(Surya Siddhanta) ကျမ်းမှ Algorithm များဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာခဲ့ရသည်။ ထို DOS Mode C++ program များကို နားလည်အောင်ဖတ်ရှုကာ Web-based ဆောဖ့်ဝဲသို့ အသွင်ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဲဒီ program ပြီးတော့ မန္တလေးမှ အကိုကြီး ကိုရဲမြတ်သူက hosting အတွက် sponsor လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံရလျှင် ကျွန်တော်တို့ သုံးယောက်လုံးသည်၊ တာဝန်အရ သော်လည်းကောင်း ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွက်သော်လည်းကောင်း၊ နာမည်ကြီးချင်လို့သော်လည်းကောင်း လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်သည်။ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုကတော့ ရာသီ၊နက္ခတ်၊ပြက္ခဒိန် များအကြောင်း နဲနဲလောက် ပိုမိုသိရှိလာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါသည်။
ယခု အဲဒီ သူရိယသိဒ္နန္တ(Surya Siddhanta) ကျမ်းအကြောင်း နည်းနည်း ပြောပြချင်သည်။ ကျွန်တော် သိထားသလောက် အသိသည် တောင်ဇလပ်ပန်းကို ထုပ်သော ဖက်မျှသာ မွှေးပျံ့မည်ကို ဦးစွာဝန်ခံပါသည်။ အဲဒီ သိထားသလောက်ကလေးကိုပဲ ပြောပြချင်ပါသည်။
နက္ခတ္တဗေဒတွင် နှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။ အတွက်ပိုင်း နှင့် အဟောပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပြောပြချင်သည်မှာ အတွက်ပိုင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ၄င်းဆောဖ့်ဝဲ အတွင်းဘက် မှ Algorithm များသည် ရှေးဟောင်း အိန္ဒိယ နက္ခတ်ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် သူရိယသိဒ္ဓန္တကျမ်းလာ နည်းနိသျှ ကို အခြေပြုထားသည် ကို အကျမ်းအားဖြင့် သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သူရိယသိဒ္ဓန္တကျမ်း သည် အိန္ဒိယမှ ခေတ်ဦး နက္ခတ္တဗေဒ(Astronomy) ပညာဆိုင်ရာ ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နောက် ၄-ရာစုလောက် မှ extant version စထွက်သည်။ နောက်ပိုင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အာရဗီဘာသာစကားသို့လည်းကောင်း၊ အနောက်တိုင်း တွင် လက်တင်ဘာသာ စကားသို့လည်းကောင်း ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ကြသည်။ အနောက်တိုင်း ပညာရပ်များတွင် ၄င်း၏ အငွေ့အသက်များ လွှမ်းမိုးဆဲဖြစ်သည်။(ရေးသူမသိပါ၊ တချို့စာအုပ်များတွင်လည်း ဈန်အဘိဥာဉ်ရ ရသေ့ တပသီများက အဘိဥာဉ်ဖြင့် စကြ၀ဠာတခွင် ကို ရှုစား၍ စီရင်ထားသည်ဟုလည်း ရေးထားကြသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အံ့ဖွယ်ကောင်းအောင် တိကျလှ၍ဖြစ်သည်။)
ရှေးရှေးတုံးက အင်္ဂလိပ် စက်နာရီ မရှိ။ အချိန်ကို သူတို့နည်းသူတို့ဟန်ဖြင့် ဒီလိုတွက်ကြသည်။
၁။ အသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်တချက် (one respiration) မှစတင်ရေတွက်သည်။ ၄င်းကို ၁ ပရနာ (prana)။
၂။ အသက်ခြောက်ကြိမ်ရှုသွင်းရှုထုတ်ကို ၁ ၀ိနဒီ(vinadi)။
၃။ ၆၀ ၀ိနဒီ(vinadi)ကို ၁ နဒီ(nadi)။
၄။ ၆၀ နဒီ လျှင် ၁ ရက် (နေ့+ည) ၊ ၄င်းရက်အမျိုးအစားကို "သာဝန"(savana)(civil) ရက် ဟုခေါ်သည်။
၅။ ၄င်း "သာဝန(savana)" ၃၀ ရက် လျှင် ၁ "သာဝန(savana)" လ၊
၆။ နောက်တနည်း လပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေးအကြောင်း ကို တိထီ(tithi)၊ တိထီ(tithi) ၁၅ ခါပေါ်ပြီး ၁၅ခါ ငုပ်လျှင် တလ၊ အင်္ဂလိပ်လို ဒီလိုနည်းဖြင့်ရေတွက်တဲ့လကို Lunar Month ဟုခေါ်သည်။
၇။ ၄င်း ၁၂ လ လျှင် လူတို့သက်တမ်းအားဖြင့် တနှစ်။
၈။ လူတစ်နှစ်သည် နတ်တို့၏ သက်တမ်း အားဖြင့် ၁ ရက်
၉။ နက်သက် ၃၆၀ ရက် သည် နတ်နှစ် ၁ နှစ်
၁၀။ နတ်သက် ၁၂၀၀၀ နှစ် ကို "ကတယုဂ်(caturyuga)" တစ်ခု ဟုခေါ်သည်။ "ယုဂ်(yuga)" ဆိုသည်မှာ ယုဂ(yuga)-အပိုင်းအခြား။ (လူတို့ ၏ နှစ် အားဖြင့် ပြန်လည်ရေတွက်လျှင် ၄၃၂၀၀၀၀ နှစ်)။ ၄င်း "ယုဂ်" ၁၀ ပုံပုံပြီး ၄ပုံ၊ ၃ပုံ၊ ၂ပုံ၊ ၁ပုံ ခွဲသည်။ အဲဒီအပိုင်း အခြားကို "ကပ်(krta)" ဟုခေါ်သည်။ တက်ကပ် နှင့် ဆုပ်ကပ် ဆိုတာလူကြီးသူမတွေ ပြောတာကြားဖူးကြမည်ထင်သည်။(ယခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ "ကပ်(krta)" သည် "ဆုပ်ကပ်" ဖြစ်သည်။ "ကလိယုဂ် ဆုပ်ကပ်မှာ လုပ်ရတ်နှင့်ပျော်ရတယ်~ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း")
၁၁။ ၄င်း "ကတယုဂ်(caturyuga)" ပေါင်း ၁၀၀၀ "ယုဂ်(yuga)" ကို ၁ "ကမ္ဘာ(kalpa)"
၁၂။ ၄င်း "၁ ကမ္ဘာ(kalpa)" သည် ဗြဟ္မာတို့ ၏ "တစ် နေ့လည်ခင်း"၊ ဗြဟ္မာတို့ ၏ ညကား နောက်ထပ်တကမ္ဘာ(kalpa)။
အမှတ်မဲ့ကြည့်လျှင် ပေါက်ကရတွေပါလားဟုထင်မြင်စရာရှိသည်။ ဒီလိုပေါက်ကရ တွေတွက် တော့ ပေါက်ကရတွေထွက် မှာပေါ့ဟုပြောစရာရှိသည်။ တိကျသလော မတိကျသလော ဥပမာ အားဖြင့် ပြောပြပါမည်။ သူရိယသိဒ္နန္တကျမ်းလာ Algorithm ဖြင့် တွက်လျှင် သာဝန(savana) တစ်နှစ် ကို 365.2563627 ရက်ဖြစ်သည်။ ယခု သိပ္ပံနည်းကျနည်းဖြင့် တွက်လျှင် သာဝန(savana)တစ်နှစ်ကို 365.25636305 ရက် ဖြစ်သည်။ ရှေးရှေးတည်းက ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းက သချာင်္ပညာက ဒီလောက်ထိ တိကျဆဲ ခောတ်မှီဆဲဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆောဖ့်ဝဲမှာက ဒီ ရှေးဟောင်း Algorithm တွေကို အခြေပြုပြီး ခောတ်သစ်သချာင်္အသွင်ပြောင်းကာ ကမ္ဘာစဖြစ်တဲ့ရက်ကို အခြေပြုကိန်းအဖြစ် တွက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Web site ထဲမှာ မိတ်ဆွေရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်ကို ထည့်ပြီး တွက်လိုက်တာနဲ့ Program Code ထဲမှာ ကမ္ဘာစတည်တဲ့ ရက်ကနေ စပြီးတော့ မိတ်ဆွေမွေးတဲ့ အထိ ရက်စုစုပေါင်းကို အရင်တွက်စေပါတယ်။ နောက်မှ အဲဒီကိန်းကို ဂြိုဟ်အသီးသီးရဲ Position တွေတွက်တဲ့ Methods တွေထဲကို Parameter Passing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂြိုဟ် အသီးသီးရဲ့ အမြန်နှုံး၊ ကမ္ဘာလည်အား၊ ကမ္ဘာကြီး၏ ကြန္တီ ခေါ် စောင်းနှုံးစတာတွေ ရော Parameter တွေအဖြစ့်ထည့်တွက်ထားရသည်။ (ကမ္ဘာကြီးသည် 23.5 ဒီဂရီ စောင်းနေသည်။ သူရိယသိဒ္နန္တမှာ အဲဒါကို ကြန္နီလို့ခေါ်သည်၊ ကိန်းသေ၂၃ အံသာ ၃၀လိတ္တာဟု ညွှန်းထားသည်။) ဂြိုဟ်များ အားလုံးသည် ဘဲဥပုံ လည်ပါတ်နေသဖြင့် Position များကို တွက်ရာတွင် SINE, COSINE, TANGENT, SECANT တို့ဖြင့်တွက်ထားရသည်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Places, Motion, Direction, Moon and Eclipses, Projection of Eclipses, Planetary Conjuctions, Stars Rising and Settings, Moon Rising and Settings, Malignant Aspects of the Sun and Moon, Gnomon စတာတွေ ကို C# Planet Class ထဲမှာ Method တွေခွဲပြီး တွက်ထုတ်ထားသည်။
ဘုရားမပွင့်ခင်တည်းက ပေါ်တဲ့ ကျမ်းမှာ SIN တွေ COS တွေ ဘယ်ပါမလဲ လို့ပြောစရာ ရှိသည်။ ရှင်းဦးအံ့... သူရိယသိဒ္နန္တတွင် SINE ကို "(jya)" ဟုခေါ်သည်၊ COSINE ကို ""(kojya)"" ဟုခေါ်လေသည်။ INVERSE SINE ကို "(otkramjya)" ဟုခေါ်သည်။ ဘုရားမပွင့်ခင်တည်းက ကမ္ဘာကြီးလုံးတယ်ဆိုတာ၊ ကမ္ဘာကြီးစောင်းနေတယ်ဆိုတာ၊ နေတွေလတွေ ဂြိုဟ်တွေ ဟာ ဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းနဲ့ သွားနေတယ်ဆိုတာတွေ က ရှေးလူတွေ သိပြီးသားဖြစ်ပုံရလေသည်။ Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Siddhanta
ဒါတွေကို အနောက်နိုင်ငံသားတွေ အရင်သိတာလား၊ အရှေ့တိုင်းသားတွေ အရင်သိတာလား ဆိုတာ ကွဲပြားသွားခဲ့ရလေသည်။
ငယ်ငယ်က ဖတ်ရှုဖူးသော ဦးဘဂျမ်း ၏ ကာတွန်းတပုဒ်ကို အမှတ်ရပါသည်။
လူငယ်။ "အဘရေ... အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လေယာဉ်ပျံတွေပေါ်နေပြီတဲ့"
အဘိုးအို။ "သူတို့က ခုမှပါကွာ... ဒသဂီရိတို့များ မယ်သီတာကို ခိုးတုံးက ရထားပျံနဲ့တဲ့"
မယုံမရှိပါနှင့်။ အဲဒါ တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရှေးဟောင်း ပညာရပ်များတွင်မြုပ်ကွက်များ အမှန်တကယ်ပင် များစွာရှိပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖူးမှ အံ့သြဘနန်းဖြစ်ခဲ့ရဘူးသည်။ ဂျပန်တွင် စက်ရုပ်များ ကို တွင်တွင်ကြီး အသုံးပြုနေကြသည်။ ငယ်ငယ်က သင်ကြားခဲ့ရသည့် Computer Science တွင်လည်း Artifical Intelligence ဟုခေါ်သည့်ဘာသာရပ်များရှိပါသည်။ တကယ်တမ်းကတော့ သူတို့ကခုမှဖြစ်ပါသည်။ ရှေးရှေးတုံးက စက္ကောမ ဟူသည့် အတတ်သည် အမှန်စင်စစ် Artifical Intelligence ထည့်သွင်းထားသည့် စက်ရုပ်များ ပင် မဟုတ်ပေလော။ အရှေ့တိုင်းထုံးစံ အတိုင်း ဆရာစားချန်ခြင်း၊ Documentation မကောင်းခြင်း၊ Opensource မဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် တိမ်မြုပ် ပျောက်ကွယ်သွား ၍ လွန်စွာနှမြောစရာကောင်းသည်။
မြန်မာ ထန်းဖူးဇာတာ ဗေဒင်ဆောဖ့်ဝဲ မူရင်း version သည် online မှာ ယခုတိုင်အောင်ရှိပါသေးသည်။ http://horo.mandalayalpha.com/bchart.aspx မြန်မာစာ မြင်ရအောင် မြန်မာစာ font ကို download လုပ်ပါ။ http://horo.mandalayalpha.com/Download/Natas___.ttf
အဲဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ဇာတာသင်တွက်ကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေမှာ ထန်းဖူးဇာတာ လက်ဝယ်
ရှိလျှင်လည်း အခုအွန်လိုင်းက တွက်တဲ့အဖြေနဲ့ မှန်မမှန် တိုက်စစ်ကြည့်ပါ။
အဟောလုံးဝ မပါပါ။ အတွက် သက်သက်ဖြစ်သည်။
Posted by Philip Shield at 10:56 AM
thanks for this post.very interesting. pls carry on
The end of Clomid therapy in treating infertility is to locate normal ovulation rather than origin the condition of numerous eggs. In olden days ovulation is established, there is no gain to increasing the dosage aid . Numerous studies accompany that pregnancy regularly occurs during the elementary three months of infertility cure and treatment beyond six months is not recommended. Clomid can cause side effects such as ovarian hyperstimulation (rare), visual disturbances, nausea, diminished "quality" of the cervical mucus, multiple births, and others.
Clomid is in many cases prescribed at near generalists asa"start with oblique" ovulation induction therapy. Most patients should be subjected to the fertility "workup" prior to outset any therapy. There could be various causes of infertility in wing as well as to ovulatory disorders, including endometriosis, tubal disease, cervical circumstance and others. Also, Clomid therapy should not be initiated untilasemen criticism has been completed.
Somali pirates something going their attacks against intercontinental ships in and all compact to the Gulf of Aden, undeterred clinch the restraint of stepped-up worldwide naval escorts and patrols - and the increased non-starter classification of their attacks. At the beck agreements with Somalia, the U.N, and each other, ships tie-in to fifteen countries at this very moment guarding the area. Somali pirates - who sire won themselves scarcely $200 million in deliverance since closer the start 2008 - are being captured more oft-times recompense the patch being, and handed during to authorities in Kenya, Yemen and Somalia on account of trial. Controlled here are some latest photos of piracy elsewhere the skim of Somalia, and the worldwide efforts to limitation it in.
[url=http://debat.q.dk/members/clomid-doses-poor-egg-production-17/default.aspx]clomid doses poor egg production[/url]
[url=http://www.assemblyforum.usbnc.org/members/clomid-a-fertility-drug-26.aspx]clomidafertility drug[/url]
[url=http://debat.q.dk/members/does-clomid-change-menstrual-cycles-44/default.aspx]does clomid change menstrual cycles[/url]
to the article there is quietasuspect as you did in the go over likealead balloonafall in love with delivery of this demand www.google.com/ie?as_q=video enhancer 1.7 ?
I noticed the phrase you procure not used. Or you profit by the dark methods of helping of the resource. I takeaweek and do necheg
အစ်ကို့ပို့စ်ကို ညီ့ဘလော့မှာ တိုက်ရိုက်ကူးချပါကြောင်းဝန်ခံရင်း ကူးချခွင့်ပြုပါအစ်ကို။
ခွင့်ပြုမစောင့်ပဲ ညီမောင်တော့ ကူးသွားပါပြီ။ ပညာရလွန်းလို့ပါခင်ဗျ။
သူရိယသိဒ္နန္တ(Surya Siddhanta) ကျမ်း ခေါ် ခောတ်သစ်သချ...
KhunMyaHlaing ၏ "အမှန်တကယ်ကြီးပြင်းလာအောင်ကလေးတွေက...
mmglite သို့ မြန်မာ GMail
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက... (၃)
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက... (၂) မန်းကျည်းရွက်နုန...
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က... (၁) ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က... ...
အိမ်ချမ်းမြေ့ ၏ ချစ်သူ့အိမ် ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေ ခင...